ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကြီး (တတိယမြောက်နေ့) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကြီး (တတိယမြောက်နေ့)
ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကြီး (တတိယမြောက်နေ့)
Posted by ပိုင်လေး on Feb 18, 2012 in Copy/Paste | 10 comments
ပြည်သူတွေ မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင် ကျနေရတဲ့ ရွှေညဝါဆရာတော် ဆွမ်းခံပွဲ (တတိယမြောက်နေ့)
ရွှေညဝါ ဆရာတော်ကြီးနဲ့ သံဃာတော်တွေ ဆွမ်းခံကြွတဲ့ တတိယမြောက်နေ့ပါ..။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ နေ့စဉ်ရက်ဆက် လိုက်ပါပေးနေတဲ့ စမ်းချောင်းကိုကိုကြီးနဲ့ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်မှ ဒီငြိမ်းလင်းတို့ အပါအဝင် ဆရာတော်ကြီးကို ကြည်ညိုကြတဲ့ ပြည်သူတွေ လိုက်ပါခဲ့ကြပါတယ်…။ ဆွမ်းခံရရှိတဲ့ ဆွမ်း၊ ဟင်းနဲ့ လှူဖွယ်ဝတ္ထုတွေ အပါအဝင် ရရှိတဲ့ဝတ္ထုငွေတွေကို လှိုင်သာယာ မီးဘေးဒုက္ခသည်တွေကို သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်..။
ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။
လူတွေကြည့်ရတာ မျက်နှာလေးတွေ ညှိုးငယ်နေကြတယ်။
တမင်ဇာတ်တိုက်ပြီး လုပ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။
အလှူခံရတာကို မီးဘေးသမား သွားလှူတယ် ဆိုတော့ တကယ် ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။
ပုံတွေကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်လိုက်တာ..
မြန်မာ နိုင်ငံတော်၌ ရှေးအခါက တစ်ကြိမ် တစ်ခါမျှ မရခဲ့ဖူးသော ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃာ့ ညီညွတ်ရေးကြီးကို ရရှိ၍ သံဃာ့ အဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းကာ ”သံဃာ့ကိစ္စ သံဃာ ဆောင်ရွက်” ဟူသော မူအရ သာသနာ့ ကိစ္စအဝဝကို သံဃာတော်များ ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်ခွင့် ရသဖြင့် သာသနာတော်၌ အဓမ္မဝါဒများကို နှိမ်နင်းနိုင်ခြင်း စသော အကျိုးတရား များစွာ ဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃာ့ ညီညွတ်ရေးကြီး မပြိုကွဲရန် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရမည့် တာဝန်သည် ရဟန်း သာမဏေတိုင်း၏ တာဝန် ဖြစ်သည်။ ဤတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ မထမ်းဆောင် နိုင်ကြသဖြင့် သံဃာ့ ညီညွတ်ရေးကြီး ပြိုကွဲ၍ သံဃာ့ အဖွဲ့အစည်းများ ပျက်စီးသွားပါက နောင်တစ်ဖန် ဤအခွင့်အရေးမျိုး ရရှိရန် မျှော်မှန်း၍ ရနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
One should listen what Shwenyawar Sayadaw is saying.
At first, I also thought that MAHANA is not fair. But I became understood why after hearing what this monk said.
Actually, MAHANA should ban this monk forever.
“”ပါတီနိုင်ငံရေး ဟူသည် လူဝတ်ကြောင်၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ကိစ္စ တာဝန်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ရဟန်း သာမဏေများသည်ကား မည်သည့် ပါတီကပင် အစိုးရအဖြစ် တက်ရောက်လာ
သည် ဖြစ်စေ ထိုတက်ရောက်လာသော အစိုးရ၏ တရားနှင့်အညီ ပေးအပ်သော
အာဏာစက် အကူအညီ အထောက်အပံ့ကို ရယူ၍ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သာသနာတော်ကြီးကို
စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်း သွားရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။””
အဲဒီတော့ စစ်တပ်က အလိုတော်ရိတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး လိမ်စား၊ညာစား ဘုန်းကြီးတွေကျတော့
ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူး လူဝတ်ကြောင်တွေပေါ့။တော်တော် မျက်နှာပြောင်တဲ့ သာသနာဖျက်တွေ။
ရခိုင်ဖွား ဦးဥတ္တမတို့ လို ဘုန်းကြီးမျိုးထပ်ပေါ်ပေါက်စေချင်မိပါတယ်။“ကရက်ဒေါက် မင်းထွက်
သွား”လို့ တော့မပြောရတော့ဘူး“စစ်ခွေးတွေ တန်းလျားပြန်ပါ”။ဒါပါဘဲဗျာ။
(“သံဃာ့ဂိုဏ်းဝင် ရဟန်း သာမဏေတို့သည် ပါတီ နိုင်ငံရေးများ၌ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခြင်း၊ လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ သူတစ်ပါးအား တိုက်တွန်းခြင်းများမှ ရှောင်ရှားကြရန် ညွှန်ကြား လိုက်ပါသည်။”)
ရဟန်း က ပါတီနိင်ငံရေးတွေမှာမပါရဘူးဆိုတော့..
တကယ်လို့ ကြံဖွတ် အသင်းဖက်ကနေပါဝင်မယ့် ရဟန်းသံဃာတော် ဆိုရင်ကော…
သူခေါ်တယ် လာပါ လာပါ တောင်ဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်
နိုင်ငံ့အရေးမို့ နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်…
ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ ၀ိနည်းတွေအကြောင်းတော့ တပည့်တော် မသိပါ၊ဒါပေမယ့် လဲ သာသနာ့ဝန်အချင်းချင်း ဒီလိုမျိုး ကျောင်းမှာမနေရဆိုတဲ့ အာဏာသုံးတာတော့ လူတယောက် အတွေး နဲ့ တွေးကြည့်တာ တောင်မသင့်တော်ဘူး လို့ ထင်ပါတယ်ဘုရား ၊ တကယ်လို့ လုပ်ချင်ရင်ရင်လဲ လူတွေလို အစည်းအဝေး( သံဃာအများစု ပါဝင်သော ) အစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီး ဘုရားတရားတော်နဲ့ အညီဆုံးဖြတ်ကြစေချင်ပါတယ် ဘုရား။ဘုန်းကြီး က တရားမဟောရ၊ကျောင်းတိုက် မှာ မနေရ ဆိုတာ ကြားရတာနဲ့တင် ၀မ်းနဲရတာ၊ယခုမြင်ရတော့ ပိုလို့တောင်ဆိုးပါသေးတယ်